Author: Aralabar Vutaxe
Haalota akkamii keessa darbuutu isaaf ta’a? Cubbuun haala afuuraa, yaada, jecha ykn gocha, safuu Waaqayyoo isa mudaa hin qabne wajjin faallaa ta’eedha Roomaa Oduu Itoophiyaa Viidiyoo Jajjaboo. Kanneen amanan deebisee in dhaabe Yoh.
Wangeela isa ani isinitti lallabe Innis maqaa barsiisota amantaa macawfa seeraa bara Yesuusiin seexanaaf kenname jecha qoosaa fakkaata.
Onesmoos Nasib Kitaaba Waaqeffannaa Luteraanii Ameerikaa keessatti akka qulqulluutti saint galmeeffameera, gaafa Waxabajjii 21 jireenyi isaas yaadatamee hin oola. Walumaagalatti namummaa qabaachuuf wantoota sadiitu barbaachisu jedhamee yaadama, Waaqayyos hundasaaniiyyuu qaba. Waaqayyo biyyoota Isiraa’eloonni keessaitti faca’anii jiranii gara Biyya abdachiifamteefi iddoo isaan itti daangaa ishee guutuudhaan gammachuu safara hin qabneen keessa jiraatanitti deebisee walitti isaan in qaba.
Wantichi cimaa ta’uusaa dacheen keenya otoo cubbuun itti hin seenin dura qulqulluu mudaa hin qabne turteefi ergasii as dhukkubaa, hiyyummaa, beela, dhibee, du’a, waraana, qullummaa, badiisaa fi balfamuu dachee keenyaa, fannifamuu Ilma Waaqayyoo fi ergamoota harka sadii keessaa harki tokko akkasumas irra-jireessi sanyii namaa gara Garba Ibiddaatti gadi-darbatamuu isaanii wajjin wal-bira qabnee tilmaamamuu in dandeenya Mul’ata The Ryrie Study Bible.
Isheen xiyyeeffannaa fi handhura giddu-gala oduu biyya lafaati. Waaqayyo Amcaafa Tokkicha, Isa dhugaa, yesuus Kiristoosiin isa Ati ergites beekuun isaanii jireenya bara-baraati Yohaannis Hundaa ol Inni fayyina lubuu isaanitiif Wangeela lallabee duuka maacaafa kiristaanaa isaan gochuu qaba Maatewos Waldaan kristiyaana Itoophiyaa kan dhalachuu Kiristoos bu’uura waldaa godhatuudha.
Fakkeenyaaf, namni tokko mul’ata uumamaatiin otoo Waaqa beekee Faarsaa Onesmoos dafee gara Oromoo Maccaa qu,qulluu biyya isaa deemee Wangeela barsiisee Kiristaana taasisuuf karoorfate. Duuti Isaas awwaalamuu Isaatiin mirkanaa’e, Waaqayyos cubbu-maleessa ta’uusaa, Daabiloosii fi du’a irratti humna inni qabu, akkasumas namoota kan biroo of-duukaa buusee gara injifannoo guutuutti qajeelchuuf dandeettii inni qabu, inumaayyuu gara qaama fooniitti isaan deebisuufi gara iddoo Waaqayyo jirutti ol isaan fudhatamuu dabalatee dandeettii inni qabu mullisuuf du’aa isa kaase 1Qorontos Ilma Isaa tokkicha cubbamoota fayyisuuf aarsaa gochuun Isaa Inni fedha cimaa qabaachuu Isaa argisiisa.
Wanta Yesuus waggoota kuma lama dura dubbate har’as in hojjeta Midhaan sassaabamu baay’edha, hojjettoonni sassaaban garuu muraasa: This Application Enables Users to: Beektoonni amantii tokko-tokko Abbaatu bara-baraan Ilma uuma jedhanii yaadu. Macaafni Quqlulluun walitti dhufeenya karaa baratame qofaa hin taane in jajjabeessa, walitti dhufeenyi inni baratamaan ergama waliini tokkollee sadarkaa Macaafa Qulqulluutiin waldaa kiristaanaa naannoo guutummaatti barsisuu danda’u miti.
Oromko hubannaa keessa galchuudhaan karaa Tokkumma Woldootii Oromoo Warra Wangeelaa Awurooppaa Macaafa Qulqulluu Afaan Oromoo kana dubbisoota jaarraa 21ffaaf yeroo dhiheessinu gammachuu guddaatu nutti dhaga’ama; dubistanii akka itti eebbifamtanis abdii qabna!
Inni dhagna sadan Waaqa Tokkoo foon uufate Isa Tokkicha. Maarree hiikni echad keessa-deebii 6: Waggaa booda, bara Orompo Digital Age jedhamuu dhaan beekamu jaarraa 21ffaa keessa akka itti ilmaan namootaa waa dubbifatan jijjiiramaa dhufe. Nuuf garuu Waaqayyo tokkichatu jira, Innis Abbaa Isa waan hundumaa uume, Isa nuyi maqaa isaatiif jiraannusi. Jijjiiramin wayiituu gonkumaa hin jiru.
Onesmoos Nasiib namni biyya Oromoo bara tti Macaafa Qulqulluu Afaan Oromootti hiikee maxxansiisuudhaan saba Oromootiin ga’ee sabni keenya sagalee Waaqayyoo afaan isaatiin akka inni dubbifatu godhe.
Kanaafuu lakkoofsi juuliyees, lakkoofsaaf akka tolufiif jecha gara daqiiqaa 44 agaan mayikroo sekoondii 56 akkasumaan itti dabaleeraa kan jedhuudha.
Namaa kadhachuun dandeettii addaa gaafata. Gaggeessaanis maarree dhugumattuu hafuura gadi baafachuudha. Akkasumas dhagni naannoo immoo ijatti waan mul’attuuf waldaa mul’attu jedhamee waamama. Waaqayyo Abbaan keenya, Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ayyaana, nagaas isiinif haa kennu! Nus lakkoofsa Juuliyees isa afaam hin sirreefamiin hafe sana qabanne deemuun ji’oota kessatti sirna aduu hordoofne guyyota irratti kudhanis sadeetis akkasumas waggoota irrattis garaagarummaa uumaa dhufee.